Abashicileli be-DTFabavelisi kunye nabaxhasi | Focus Inc.
Ekhaya > Imveliso > Abashicileli be-DTF
I-DTF idluliselwe kwilaphu okanye amanye amavili asebenzisa umatshini woshicilelo lobushushu. I-DTF ishicilela isebenza kwikotoni kunye ne-polyblends.
Iiprinta ngokuthe ngqo kwi-FIL COFT zikuvumela ukuba uprinte uyilo kwifilimu kwaye uyidlulisele ngqo kumphezulu ocetywayo.
I-DTF ivelisa amaphepha odluliselo lwedijithali yedijithali, ephethe yonke into evela kwiileyibhile zehempe ezine, ukuya kwi-Wike-Sper-Stors, ukuya kwiiprinta ezigcweleyo. Isebenzisa ifilimu yesilwanyana kwiimpawu ezingcono zokudlulisela, i-quy-fed, kwaye yenzelwe i-peel ebandayo - kwaye idlulile kwi-freer-cinezela.
Ngumgubo ohlukileyo we-powder othandekayo oveza i-DTF iprinta i-tound yabo ethambileyo. Zimbini kuphela izithako: i-inki kunye ne-pied ye-powded yokuthambeka. Akuzange kwenzeke ukuba ifumane imvakalelo engathandekiyo ethambileyo ye-Tone-Trainic Screen kwiNkqubo yokuTshintshela kwiNkqubo yokuTshintshela - kodwa i-DTF, ufumana konke oko nangakumbi
Uyisebenzisa njani iprinta ye-DTF iprinta i-t-shirt elungileyo?
Intshayelelo Jikelele:I-DTF ukuba itekhnoloji entsha kakhulu yokushicilela, iphononongwe nge-2018, kodwa izinzile kwaye idume kwishishini lentengiso kunye ne-DIY PRODICH DORD umatshini. ezinje nge: I-T-SHICK Printa, iingxowa zokuthenga, umnqwazi, izihlangu kunye naziphi na ezinye iindwangu.
Iiprinta ze-DTF ze-DTF ze-DTF kunye nabavelisi bamaxabiso.Omnye wabathengi bethu wathi umphezulu wayo ugudileyo, ndiyithanda kakhulu i-luster yayo! Ndiyakwazi ukuseta ukuba le mveliso ingahlala iminyaka.Yiza ufunde inkqubo yokuprinta ye-DTF!
Jonga ukugxila kwimveliso entsha ye-NEBULA 62F!
Focus seDTF Isinikezeli kushicilelwa !!!
Intshayelelo General:SeDTF ukuba iteknoloji entsha kakhulu yoshicilelo sublimation, zihlolwe malunga 2018, kodwa sizinzile kwaye ethandwa ngo-2021, nto isicelo abarhwebi noshishino DIY ngokubanzi, umfanekiso uya kuba transfer nobushushu izinto ngomatshini sublimation flatbed okanye cinezela transfer ubushushu ezinxulumene umatshini. ezifana: yoshicilelo T-shirt, iingxowa ezivenkileni, umnqwazi, izihlangu kunye nezinye amalaphu.
Gxila ifomathi enkulu yeFotofi ye-DTF ye-DTF ye-DTF, kunye ne-2 ukuya kwi-4 ukuya kwi-2 ukuya kwi-4820 okanye i-I3200 iintloko zedijithali
Ukuprintwa kwe-DTF kubhekiswa kutsho njengokuthe ngqo kuprintwa kwifilimu, kwaye isebenza ngokuprinta i-profer of 'yobushushu obucinezelwe kwiingubo ezahlukeneyo (kunye nezinye izinto).Xa unalo matshini, unga ... ungashicilelwa kulo naluphi na uhlobo lwelaphu, nokuba mnyama okanye ukukhanya. Kunokubakho iintlobo ezahlukeneyo kwimigca yakho yemveliso. Gcina iindleko zabasebenzi, kwaye umsebenzi omnye unokusebenzisa umatshini. Imveliso ekhawulezayo inokuprinta iinyawo ezingama-900 + ze-Sq ngosuku.